काठमाडौं उपत्यकामा थप ४५ जनामा कोरोना पुष्टि – Everest Pati
काठमाडौं उपत्यकामा थप ४५ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ४५सहित मुलुकभर २७४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङ कार्यक्रममा बिहीबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर २७४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्।
उनकाअनुसार नयाँ संक्रमितहरुमा सुनसरीका २, झापाका ४, उदयपुरका २, सर्लाहीका १, मोरङका २, धनुषाका १४, महोत्तरीका ६, बाराका ६, पर्साका ६५, नवलपरासीका १, भक्तपुरका २, काठमाडौंका ४१, ललितपुरका २, बाराका १२, चितवनका १, दोलखाका १, गोरखाका १, रौतहटका ३, सर्लाहीका ५, नवलपरासी पूर्वका ६, अर्घाखाँचीका १, कपिलवस्तुका १, प्युठानका २, दाङका १, धादिङका ४, नुवाकोटका २, पर्साका १, स्याङ्जाका १२, लमजुङका ४, कास्कीका ३, बागलुङका ६, तनहुँका ३, बाँकेका २०, बर्दियाका ८, दाङका २, कञ्चनपुरका २, प्युठानका १, सुर्खेतका २, मुगुका १, रुपन्देहीका १, सल्यानका ६, दैलेखका १०, जाजरकोटका १, डडेलधुराका २ र दार्चुलाका १ जना रहेका छन्।
योसँगै हालसम्मको संक्रमितको १९ हजार ५ सय ४७ पुगेको छ भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या ५२२७ रहेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । पछिल्लो २० घण्टामा कोरोनाभाइरसमुक्त भई २२७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या १४ हजार २ सय ४८ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन जनाले ज्या’न गु’माएसँगै ज्या’न गु’माउनेको संख्या पनि ५१ पुगेको छ।